Shina multi-Functional Lighting Pole mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Light Pole > multi-Functional Lighting Pole
Ny mampiavaka ny andiany maro miasa dia ny mahita ny toetry ny sensor sy ny toetry ny tontolo iainana. Ny fahitana bebe kokoa momba ny fakan-tsary fanaraha-maso, sensor, RFID, foiben'ny angon-drakitra, fitaovana momba ny harena ankibon'ny tany ary famakafakana, fitaovana finday sy haino aman-jery, solosaina ary haino aman-jery amina tontolon'ny jiro iray dia manome data marobe ivelany.
Ny tsangam-bidy mavitrika maro dia vokatr'ilay fizarazarana matihanina amin'ny asa. Modules LED, tobim-pamokarana WIFI / micro / micro-monitor, fanaraha-maso, mpanara-maso maivana tokana ary modules hafa, samy manana mpanamboatra matotra avokoa izy rehetra. Saika tsy hain'ny orinasa iray ny mamita ny R&D ary ny famokarana modules rehetra. Ny fizarana matihanina momba ny asa sy ny endrika modular no lalana tokana ho an'ny vokatra indostrialy matotra.
Ny tsipika jiro maro samihafa no tena mitondra ny fanangonana fampahalalana, fanodinana ary fitsinjarana. Ny jiro an-dalambe maro an'isa dia mety hiteraka fanavotana ny fibodoana ny tany, mampiditra ny fampiasana ny loharano ary hanatsara ny sarin'ny tanàna. Mandritra izany fotoana izany, ny fenitra fananganana modely, fanamafisana ny fomba sy ny fanamafisana manokana dia torolàlana ho an'ny fampandrosoana amin'ny làlana maro samihafa.
The Featured multi-asa eny an-dalana fahazavana pole afaka ho atambatra amin'ny an-nyerana ara-kolontsaina nyetra ary maoderina singa famolavolana ny mivory ny Ahitra Toetoetra, ary afaka ihany koa tonga saina isan-karazany laryscape fahazavanaing asa fangatahana, izay afaka ho cusnymized.
Multi-asa jiro pole for eny an-dalana jiro amin'ny Wifi
Multi-asa jiro pole for eny an-dalana jiro amin'ny Wifi, Camera, Emergency Call , EV Mampianiana Quick Detailsï¼ Place ny Origin: Guangdong, Shina Brand Name: Liangtu Material : Q235, Q345, Aluminum, SS400 Type: Single-sandry Fampiharana: Square, Street, Square, expressway sns ,. Product name: Smart eny an-dalana fahazavana pole Haavo: 4-15m
Buy multi-Functional Lighting Pole nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba multi-Functional Lighting Pole ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized multi-Functional Lighting Pole Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.